Xfce 4.10 weputara egbu oge | Site na Linux
Dị ka m nwere ha kwuru n'otu oge, maka ụbọchị ndị a 4.10 mbipute nke m Ebe obibi Desktọpụ ọkacha mmasị: Xfce.
Ma ọ dị nwute, ịhapụ ụdị ọhụrụ a na-egbu oge (ka ọ dị na mbụ). Nyaahụ m banyere Peeji Xfce Wiki ebe bụ ntọhapụ oge m na-abịa gafee a mma ozi:
Ee anyị maara ụbọchị anaghị adakọ ọzọ. A ga-atụle oge ọhụụ ọhụrụ n'oge Fosdem.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ụbọchị ndị e mere atụmatụ adịghịzi adaba n’agbata mmepe na mmalite Xfce 4.10. M dere na ndepụta nke Xfce ndị a bụ azịza m natara banyere ya:
Mgbe anyị // n’ikpeazụ // chọta oge iji mezue mpempe ikpeazụ anyị kpebiri itinye na 4.10. Nick
Nick buru ibu
Nweta site na blọọgụ Jannis Pohlmann  «[…] Anyị ekpebisibeghi ụbọchị mwepụta, mana ọ bụrụ na ihe aga nke ọma, anyị ga-enwe ike ịtụgharị mbupute izizi mbụ otu ọnwa site ugbu a, na mbido Machị. Nke a ga - apụta na mwepụta ikpeazụ na Mee ma ọ bụ June ga - ekwe omume. […] »
Ya mere nwee ndidi.
Ee, nke ahụ bụ naanị m na-eche. M ga-ahapụrụ Nick mkpebi ahụ n'ihi na (a) ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ na (b) ọ bụ njikwa ntọhapụ. Na agbanyeghị na ọ masịrị anyị nhapụ anyị, achọghị m ịkwanye ya ma ọ bụrụ na ahụ erughị ndị ọzọ ahụ, na-ekwenyeghị ya n'akụkụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ karịa m.
Nick: Okwu ikpeazụ nwere na nke a.
Jannis Pohlmann kwuru
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na nkenke, Nick buru ibu o doro anya na ọ bụ onye na-eburu ọtụtụ mmepe nke Xfce na ọ bụ ya na-ekpebi mgbe a ga-eme mbido ọzọ. Have ga-echere, dị ka ọ na-ekwu, maka akụkụ ikpeazụ iji tinye Xfce 4.10 Jikere ejikere.
Na ihe niile a, azaghachiri m na m na-ahọrọ ngwaahịa 100% agwụla ma ọ bụghị ihe ewepụtara na "ọsọ" iji zute ụbọchị a kara aka, mana na ọ bụrụ na ha enweghị ike ịgbanwe na kalenda ahụ, biko egbula ya ka ndị ọrụ wee ọ dịghị nzuzu efu.
Anyị niile maara na mmepe nke Xfce Ọ dabere na oge na ọchịchọ nke ndị mmemme ya, ee, ọ dịghị ihe, anyị ga-echere. : '(
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Mgbatị Xfce 4.10 na-egbu oge
Ọ dị oke egwu!? Anọ m na-atụ anya ya, na-arịọ maka ezumike iji hụ atụmatụ ọhụrụ niile. Ọ dịghị ụzọ anyị ga-eche ma laghachi n'ọrụ.
O doro anya na ee 🙁 M na-echegbu onwe m maka Machị ka m bia wee hụ nke a. Ka o sina dị, chere mgbe ahụ.
Awwww, ha bibiri m March… Ok, mba. Echere m ihe “ọrụ” ahụ (ma ọ bụ ọrụ) ha kwuru na ha na-anwa itinye bụ ...
Echere m na ha chọrọ iji ebe Gnome 2.x hapụrụ ma ọ bụ ya mere ha ji chọọ ịkpụcha ya nke ọma
Achọghị m ịma na-eche ma ọ bụrụ na ikpeazụ ngwaahịa amama na ole na ole chinchi.
M kdeero ịnwụ, mana m ka nwere obi anụrị dịka gị maka ụdị ọhụụ a ga-ewepụta. Ma ọfụma, ka anyị chere obere oge.
Mụ onwe m bụkwa KDEero mana enwere m mmasị ịhụ etu gburugburu desktọọpụ si gbalite 🙁 kedu ihe nwute vv '
Ekwenyere m na Achọrọ m ngwaahịa 100% agwụla ma ọ bụghị ihe e mepụtara na "ọsọ" iji zute ụbọchị emebereKa anyị chere, n'ezie obere oke na-enye anyị ezigbo ịtụnanya.
n'ezie ma eleghị anya ha agaghịzi adabere na hal kpamkpam nke ga-eme ka nhazi ahụ dịkwuo mfe maka ngwaọrụ nke kwesịrị ịbụ ihe anyị na-eme ugbu a.
Enweghị ụzọ, ịnọgide na-eche.
na kalenda ọhụrụ? Achọrọ m xfce: ´ (
Eprel 16 ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma .. Thatbọchị ahụ ụdị ọhụụ pụtara
Xfce 4.10 ga - adị na Eprel 28